LAST UPDATED: 2018-04-20, 16:56
PHOTO:suppliedSicela ukufuniswa ubaba kaLuyanda Vidima ongaziwa kanti umama wakhe uFikile Happy Vidima ongasekho waseSwayimane obehlala e-Willowfontein. Sicela onolwazi athinte uSocial Worker ku 033 502 0074.
FREE sewing lessons on industrial machines are offered by the Divine Life Society. Each graduate is awarded a certificate and given an electric, manual sewing machine if all requirements are met. To register please contact Jerusha at DLS at the corner of Mysore and Lahore Roads Northdale or phone 074 218 2246.
Sicela ukufuniswa umama kaPhilani, uThabiso kanye noMpilo Dladla. Igama likamama uDumisile Nokwanda Duma owayehlala kaZulu eNkandla, washiya izingane ezimbili endaweni yaseTrustfeed , kuthiwa ugcine ukubonakala eNewcastle. Onolwazi sicela athinte social worker uZama mbambo kulenumber 033 502 0074.
Sicela ukufuniswa uVusu Thabani Dladla owayehlala eThokozani empolweni, bathutha bayohlala kwaSanti Clare Water eThekwini. Osisi bakhe uBongekile kanye noMusa Dladla, ufunwa ingane yakhe uBuhle Dladla, onolwazi angathintana nosonhlalakahle uZama Mbambo ku-033 502 0074.
Isibhedlela sase Edendale sicela ukufuniswa izihlobo zika Muziwempi Chonco olinganiselwa eminyakeni ewu64. Uthi uhlala kwaPata. Sicela abanolwazi baphuthume sibhedlela noma basithinte kulezizinamba ezilandelayo Samke Mncube 033 395 4020 Wonder Ngubane 033 395 4323.
Ngicela ukufuniswa ubaba ka Nontobeko Ndlovu ozalwa u Maggie Ntombikhona Ndlovu ongasekho. Ubaba akaziwa ukuthi ungubani. Kodwa owaziyo ukuthi wake wazwana no Maggie bathola umntwana ngicela athinte u Social worker u Zanele Makhaye 033 341 0141